ကလိုစေးထူး: နိုင်ငံ့အရေး=နိုင်ငံရေး ...
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:45 PM
နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို ကြောက်ပြီး … (ဒါမှမဟုတ် ကြောက်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး) ကိုယ့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့ အရေးကိစ္စကို တာဝန်မယူချင်တဲ့သူတွေ ...
ဒီနိုင်ငံမှာ နေပြီး .. နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အ၀ယူဖို့ကလွဲလို့ တခြားကိစ္စတွေမှာ လက်ရှောင်ချင်တတ်ကြတဲ့ တာဝန်မကျေတဲ့သူတွေ …
…. …. … …. …..
Nov 18, 2006, 2:06:00 AM
Nov 19, 2006, 7:51:00 PM
ကိုယ်က နိုင်ငံရေး မလုပ်ရင် နိုင်ငံရေးက ကိုယ့်ကို လုပ်သွားလိမ့်မယ်...
မြန်မာပြည်သူတွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ အလုပ်ခံ နေရတာကို ကြည့်တော့။
Nov 27, 2006, 6:52:00 AM